Semalt Expert: API na ny fomba tsara indrindra hanakanana data avy amin'ny tranonkala iray
Ny interface programming API na API dia ahafahanao mampiasa ny rindrambaiko sy ny fitaovanao. Miaina ao anatin'ny tontolo mihetsiketsika isika, izay miovaova be ny zava-drehetra, ary te hamonjy ny fotoanantsika sy ny herintsika isika. Ny fitaovana fitrandrahana ordinatera mahazatra dia mety handany fotoana betsaka ary mahatonga antsika tsy hiantsoroka ny orinasan-tserasera, fa ny API kosa dia toy ny hery enti-mitondra ao ambadiky ny sehatra sosialy rehetra - bulletin de paie cadre.Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny famoahana ireo angona ilaina avy amin'ny tranonkala izany, fa manitsy koa ny angon-drakitra misongadina ary mahatonga azy io ho azo vakiana sy azo ampiharina ho an'ny mpampiasa. Noho izany, azo antoka ny filazana fa ny API dia fomba tsara ho an'ny mpandrindra ny programmers sy ny mpampiasa azy mba hifandray amin'ny fampiharana azy.
Ny API dia manadihady pejy ara-teknika:
Manam-pahaizana ny manam-pahaizana fa ny API no fehezan-dalàna voafaritry ny siansa momba ny data izay mahatonga antsika ho mora ny manaisotra angona avy amin'ny tranonkala maro. Afaka mamaha ireo pejy ara-teknika izy ary manaparitaka ny mombamomba azy. Ohatra, ireo API Facebook Graph dia ampiasaina mba hahazoana sy hanakanana ny angona avy amin'ny pejy Facebook, ny vondrom-piarahamonina ary ny tambajotra hafa mitovy amin'izany.
API - Ny antonta mora indrindra
Isaky ny te-hiditra amin'ny data amin'ny tranonkala iray manokana isika dia mila mampiasa API. Raha oharina amin'ny programa sy teknika mahazatra amin'ny ordinatera hafa, ny API dia manatanteraka avy hatrany ny asany ary afaka manodina ny angon-drakitra amin'ny fiteny 120 mahery. Amin'izay ianao na handraraka ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala sinoa iray na te hamoaka vaovao avy amin'ny blaogy Japoney, ny API dia hanaisotra na hikapoka azy avy hatrany araka ny torolalanao.
Nahoana no zava-dehibe ho an'ny orinasa ny API?
Raha manana tranonkala be dia be ianao ary te hamoaka ny angon-drakitra rehetra ao anatin'ny ora iray na roa, ny API dia fomba tsara hanaovana izany. Tsy maintsy manokatra API fotsiny ianao mba hisintonana ny angon-drakitra marina. Mahasoa ny orinasa amin'ireto fomba telo manaraka ireto:
1. Ny orinasa dia afaka mamorona apps amin'ny API
Ny orinasa dia afaka mamorona rindrambaiko isan-karazany amin'ny API tsy manelingelina ny kalitao. Misy orinasan-tserasera sasantsasany mivarotra fitaovana sy rindrambaiko ary miantehitra amin'ny fisintonana vaovao avy amin'ny API misokatra mba hanamafisana ny fizotran'ny raharaham-barotra. Raha ny marina, raha tsy misy API, ny orinasa dia tsy afaka mitombo ary tsy afaka mamorona apps ilaina ho an'ny mpanjifany.
2. Ny fikarohana karohy
Zava-dehibe amin'ny orinasa ny API satria ahafahan'ireo programa mpamorona fitaovana mahatalanjona amin'ny tranokala . Ireo fitaovana ireo dia manampy antsika hanatanteraka ny andraikitsika amin'ny fomba tsara kokoa. Ohatra, ny API mora ampiasaina dia mahatonga antsika ho mora ny mahita teny sy fehezanteny votoatin'ny tranonkala. Na dia manaparitaka ny angon-drakitra aza ny API dia mikarakara ny votoatin'ny votoatin'ny voka-pifidianana ary tsy manova na manova azy ireo amin'ny vokatra.
3. Ny API dia tsara ho an'ny mpikaroka sy mpandrindra
Ireo mpandrindra sy mpandrindra ny programa dia afaka mahazo tombony avy amin'ny API ary afaka manome ny mpanjifany amin'ny fotoana mety indrindra. Ohatra, i Reddit dia natsangana ho fampiharana finday ary niantehitra tamin'ny fitaovam-pitaovam-pahombiazana sy ny angona angon-drakitra mba hividianana ny tenany. Ankehitriny Reddit dia iray amin'ireo loharanon'ny fifamoivoizana amin'ny Internet. Amin'ny fampiasana API, azonao atao ny mamorona forum forum ho an'ny Reddit ary afaka mihaona bebe kokoa ny olona ao anatin'ny andro vitsivitsy.